I-Manifesto - I-World March
Ikhaya » Bonisa
Kubonakala kweMhlaba ka-Mashi
Eminyakeni eyishumi emva kwe Izwe Lokuqala NgoMashi Lokuthula Nokungabi Nesono, izizathu ezamshukumisela, kude nokuthi ancishiswe, ziye zaqiniswa. Siphila ezweni lapho kukhula khona ubuhlakani. Indima eyisisekelo yeNhlangano Yezizwe ekuxazululeni izingxabano zamazwe aphela amandla. Izwe eligobhozela ezinkulweni eziningi, ikakhulu lithuliswa umbono ongelona iqiniso. Izinkinga zemvelo ukuthi Iqembu leRoma isigamu seminyaka eyedlule Ngezigidi zabafuduki, ababaleki kanye nabantu ababalekele imvelo abaphoqelelwa ukuba baphonsele inselelo imingcele egcwele ukungalungi nokufa. Lapho kuhloswe khona ukucacisa izimpi nokubulawa kwabantu ngezimpikiswano zezinsizakusebenza ezikhulayo. Lapho ukungqubuzana "kwamapuleti endawo" phakathi kwamandla amakhulu avelayo kuphakamisa ukungezwani okusha nokuyingozi. Umhlaba lapho ukuhaha kwabacebile abacebile kakhulu, ngisho nasemazweni athuthukile, noma yikuphi ukulindelwa komphakathi wenhlala-kahle. Amagagasi entukuthelo ekhiqizwayo agcina ngokukhohlisa futhi enza ukunyakaza okuthusayo kokunqatshwa kanye nokucwaswa kwabokufika nabokufika. Ngamafuphi, izwe, lapho ukucaciswa kobudlova, egameni "lezokuphepha", kwandisa khona ingozi yokunyuka kwezempi kwezinga lokulawula okungalawuleki.
El ISivumelwano Sokungahambisani Nezikhali ZaseNyukliya, kusuka ku-1970 , kude nasekuvuleleni indlela eya ezokuhlaselwa kwezikhali zenuzi, ihlanganisile i
Amandla okubhubhisa inqwaba, ikhulisa ngisho iklabhu yokuqala yokufa komhlaba wonke enezivumelwano zamandla enuzi manje esezandleni ze-US, Russia, China, United Kingdom, France, Israel, India, Pakistan kanye neRiphabhulikhi yaseKorea. Konke lokhu kuchaza ukuthi kungani iKomidi Lososayensi be-Atomic libeka inkomba yamanje (I-Doomsday Clock) njengoba ingozi enkulu kunazo zonke emhlabeni ihlala kusukela ku I-Crisis of the Missiles of Cuba e 1962.
Namuhla, i 2ª World March for Ukuthula kanye Nonviolence, idingeka kakhulu kunangaphambili. Kuhlelwe ukushiya iMadrid ngo-Okthoba 2 we-2019 ukukhala wonke amazwekazi, kuze kube nguMashi 8 we2020 ozophetha ngayo eMadrid. Izothuthukisa imfundo ngokungaziphathi kahle futhi ihlaziye nokunyakaza okuvikeleka emhlabeni wonke kuvikele futhi kukhuthaze
umbuso wentando yeningi, ubulungiswa bezenhlalo kanye nezemvelo, ukulingana ngokobulili, ubumbano phakathi kwabantu kanye nokusimama kwempilo emhlabeni. NgoMashi ezifuna ukwenza kubonakale futhi kunikeze amandla lezi zinhlangano, imiphakathi nezinhlangano, ekuhlanganyeleni komhlaba wonke kwemizamo ukufeza izinhloso ezilandelayo:
Phakamisa ukukhamuluka okukhulu komhlaba wonke wale "thina, izizwe " we Umqulu weZizwe Ezihlangene, ukusekela ISivumelwano Sokuvimbela Izikhali Zase-Nuclear, okuqeda ukuthi kungenzeka ukuthi inhlekelele yeplanethi futhi ikhulule izinsiza zokuxazulula izidingo eziyisisekelo zobuntu.
Cabanga Las IZizwe Ezihlangene , ukunikeza iqhaza emphakathini womphakathi, ukunciphisa uMkhandlu wezokuPhepha ukuwuguqula ube yiqiniso Umkhandlu Wokuthula Wezwe . nokudala a UMkhandlu Wezemvelo Nokuvikeleka Kwezomnotho, okuqinisa izinto ezinhlanu ezibalulekile: ukudla, amanzi, impilo, imvelo kanye nemfundo.
Cabanga a Uhlelo Lokuqeda Inzara, ngokuhambisana nama-SDG (Izinjongo Zokuthuthukiswa Okusimeme), enezimali ezidingekayo ukuze ziphumelele.
Yenza kusebenze a Uhlelo Lwezinyathelo Eziphuthumayo ngokumelene nazo zonke izinhlobo zokuphakama, ukubandlulula, ukubandlulula, ukucwaswa nokushushiswa ngocansi, ubudala, ubuhlanga, ubuzwe noma inkolo .
Phromotha a IDemocratic Charter of Global Citizenship, lokho kugcwalisa i Ukumemezela Amalungelo Abantu (ezombusazwe, ezombusazwe kanye nezomphakathi).
Hlanganisa I-Charter yomhlaba "kwi-International Agenda" ye-SDGs, ukubhekana ngokuphumelelayo nokuguquka kwesimo sezulu kanye nezinye izingxenye zokungaqiniseki kwemvelo.
Thuthukisa Akukho Violence Active ukuze ibe amandla okuguqula eqiniso wezwe, ukuphuma emkhatsini wokumiswa, ubudlova kanye nempi kuya emkhatsini wokuthula, inkhulumomphendvulwano kanye nokubambisana endaweni ngayinye, izwe kanye nesifunda kulo mbono womhlaba wonke owadluliselwa kithi ngalokhu I-World March Yokuthula Nokungabi Nesono.
Landa i-Manifesto nge-PDF
Incwadi Yezwe engenabo Udlame
Landa iManifesto (yesiFulentshi)